Translate Tajik to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Tajik to Myanmar (Burmese), Tajik to Myanmar (Burmese) translations, Tajik to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Салом, шумо чӣ хел မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Оё касе ҳаст? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Ман дар ҳақиқат хеле зиёд дӯст медорам ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Ин гамбургер чанд пул дорад? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Метавонед ба ман занг занед? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Ман шавқ дорам ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Ман парвоз ба таъхир афтод အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Ман дар ин ҷо барои бизнес ҳастам ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Салом, номи ман аст မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Ман ғамгинам, вале ман оиладорам ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Ман мехоҳам аз шумо пурсам ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Метавонед маро ба фурудгоҳ баред? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Ҳоло вақти он расидааст, лутфан? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Наздиктарин идораи полис дар куҷост? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Оё ман метавонам телефони мобилии худро лутфан лутфан? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Шумо барои ман кӯмак карда метавонед? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Маро ба нӯшидан диҳед, лутфан? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Ин чанд пул мешавад? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Ман ба gluten аллергия дорам ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Пизишкро ҷеғ занед ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Оё табобат ҳаст? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Метавонам занг занам? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Ба ман занг занед лутфан. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ин ҷо хеле хуб аст ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Маро ба меҳмонхона лутф кунед ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Рақами ҳуҷраи ман чист? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?